प्रहरी प्रशासनले सरकारलाई असहयोग गरेकोले आईजीपीले राजिनामा दिनुपर्छः बर्तौला « News24 : Premium News Channel
प्रहरी प्रशासनले सरकारलाई असहयोग गरेकोले आईजीपीले राजिनामा दिनुपर्छः बर्तौला
काठमाडौं । अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बर्तौलाले महिनौं बित्दापनि अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै प्रहरी प्रशासन चुकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘प्रहरी प्रशासनले सरकारलाई असहयोग गर्यो । निर्मला पन्त प्रकरणमा अपराधीलाई कारवाही गर्न प्रहरी चुकेको छ । हत्याकाण्डको घट्नामा प्रहरीहरुको कहीँ न कहीँ कनेक्शन छ भन्ने कुरा पछिल्लो दिनमा शंका गरिएको छ ।’
प्रहरी प्रशासनले यो घट्नाको प्रमाणहरु नष्ट पारेको र प्रभावकारी रुपमा अनुशन्धान नगरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘त्यसैले त्यो प्रहरीको नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रमुखलाई अविलम्ब बर्खास्ती गर्नुपर्छ । अविलम्ब निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर हामी दुवै विद्यार्थी संगठनले माग राख्यौं । किन राख्यौं ? प्रधामन्त्री हाम्रै पार्टीका हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री हाम्रै हुनुुहुन्छ । तर, एउटा कर्मचारीको निलम्बन किन भन्यौं ?
यतिवेला वर्तमान सरकार यो देशमा सबै हिसाबले भयरहित समाजको निर्माण गर्न, शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि दृढताका साथ अघि बढिरहेको छ । यस कदममा महत्वपूर्ण ढंगबाट सहयोग गर्ने निकाय को हो भने त्यो प्रहरी हो । तर, प्रहरीले सरकारको, गृह प्रशासनको, मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराधीहरुलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने त्यो एउटा अभियान बनाएर कानुनी राज्यको उद्धघोषका साथ सरकार अघि बढेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न प्रहरी चुकेको छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको कारणले प्रहरीको नेतृत्व आईजीपीले असहयोग गरेको कारण दिनप्रदिन अपराधीहरुले सुरक्षित हिसाबले उन्मुक्ति पाउने भएकोले हामीले आईजीपीलाई अविलम्ब निलम्बन गरियोस भनेका हौं । र निर्मला पन्तका हत्यामा संलग्न दोषीहरुलई कारबाही होस् ।’